Umbuzo: Ungawafudumeza Kanjani Amanzi Ethangini Lezinhlanzi - BikeHike
Ikhaya » Okuxubile » Umbuzo: Ungawafudumeza Kanjani Amanzi Ethangini Lezinhlanzi
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi amanzi ethangi lezinhlanzi afudumale?
Ngenzenjani uma amanzi ami e-aquarium ebanda?
Ungakwazi yini ukufaka amanzi e-microwave ethangini lezinhlanzi?
Kufanele kube yiliphi izinga lokushisa ithange lezinhlanzi zamanzi abandayo?
Kufanele libe ngakanani izinga lokushisa ithange lami lezinhlanzi?
Ngingaligcina kanjani ithangi lami lifudumele ngaphandle kwehitha?
Ingabe amanzi ethangi lami lezinhlanzi kufanele azizwe efudumele?
Ngingakwazi ukusebenzisa ithemometha yenyama ukuze ngithole amanzi?
Ingabe amanzi anosawoti angakwazi ukufaka i-microwave?
Ulenza kanjani umoya ithange lezinhlanzi ngaphandle kwepompo?
Ingabe udinga i-heater yezinhlanzi zamanzi abandayo?
Ingabe izinhlanzi ziyawathanda amanzi abandayo noma afudumele?
Ingabe izinhlanzi zasemanzini abandayo zidinga ukukhanya?
Amanzi anjani 85?
Ingabe izinhlanzi zamanzi abandayo zihlala ethangini elishisayo?
Ngilihlola kanjani izinga lokushisa lami lamanzi e-aquarium?
Iyiphi engcono inhlanzi yamanzi ashisayo noma abandayo?
Ngiwalungisa kanjani amanzi ethangi lami lezinhlanzi?
Kungakanani ngaphambi kokuthi ufake izinhlanzi zamanzi abandayo ethangini elisha?
Khulisa amanzi ethangi lakho kancane kancane (isixazululo sesikhashana). Kunconywa kuphela njengesixazululo sesikhashana lapho uzama ukugcina ithangi lezinhlanzi lifudumele ngaphandle kwe-heater. Ungakwazi ukufudumeza amanzi kancane kancane ethangini lakho ngokungeza ibhodlela elivaliwe eligcwaliswe ngamanzi ashisayo ku-aquarium yakho bese uliyeka lintante lize liqede umsebenzi walo.
kungase kuthathe phakathi kwamahora angu-24 no-48 futhi kufinyelele ezingeni lokushisa. Lapho ngiphonsa iheater yami ethangini lami (cishe ama-2ft, 20 amalitha), kuthathe cishe amahora angama-30-36 ukufika ezingeni lokushisa elifanele.
Nntanta isikhwama seqhwa noma amanzi abandayo ethangini lezinhlanzi ukuze wehlise kancane izinga lokushisa lamanzi. (Qaphela ukuthi ungehlisi izinga lokushisa libe ngaphezu kuka-2 noma 3 degrees F esikhathini esingamahora angu-4.) Gwema ukufaka ama-ice cubes ngqo ku-aquarium yakho ngaphandle uma uwenza nge-osmosis ehlanekezelwe noma amanzi ane-dechlorinated.
Ilungu le-Premium. Ngisebenzisa i-microwave ukufudumala amanzi ami okushintsha amanzi, cishe njalo ebusika. Kulungile.
Ngokuvamile, uma kuziwa ekukhetheni izinga lokushisa, izinhlanzi zizowela kwesinye sezigaba ezintathu: Izinhlanzi zamanzi abandayo: Ngaphansi kuka-68°F (20°C) Izinhlanzi ezishisayo: 75-80°F (24-27°C) Izinhlanzi ezipholile : Ibanga elibanzi lamazinga okushisa, ngokuvamile adlula izigaba ezingenhla.
Ububanzi obuhle bungu-76° ukuya ku-80°F (25° ukuya ku-27°C). Izinhlobo ezimbalwa zidinga ukugcinwa amadigri ambalwa afudumele, futhi ezinye izinhlobo zidinga amazinga okushisa ambalwa apholile. I-thermometer ibalulekile. Uhlobo olunamathelayo lukwenza ukwazi ukuhlola izinga lokushisa noma nini lapho ubheka i-aquarium.
Yiziphi Izinto Ezinhle Okufanele Uzenze Ukuze Ugcine Ithangi Lezinhlanzi Lifudumele Ngaphandle Kwe-heater? Sebenzisa ithangi elincane. Thola izinhlanzi zasemanzini abandayo. Vula i-heater endlini yakho. Hambisa i-aquarium endaweni efudumele yekhaya lakho/eduze ne-heater. Sebenzisa amanzi afudumele ukushintsha amanzi. Gxilisa izindonga zengilazi zethangi lakho.
Ngokuvamile kufanele izwe lifudumele, yebo.
Ukusebenzisa I-Thermometer Yenyama Yamanzi Ungayisebenzisa ukuze uqinisekise ukuthi okusele kushiselwa ngokwanele noma ukuhlola izinga lokushisa kwamanzi. Kuyini lokhu? Ukusebenzisa ithemometha yenyama ukuhlola izinga lokushisa kwamanzi, vele ufake i-probe ye-thermometer ebhodweni lamanzi bese ulinda imizuzwana embalwa ukuze kufundwe izinga lokushisa lokugcina.
I-microwave izolinyazwa imisebe ye-microwave njengoba usawoti awukwazi ukumunca ukushisa okuningi. Izingqimba zikasawoti eziqinile zilukhuni ukuhlephuka ngenxa yokuthi wonke amanzi azolahleka.
Ngokungafani nama-aquariums asezindaweni ezishisayo, awudingi ukuhlinzeka ngesifudumezi sethangi lakho lezinhlanzi zamanzi abandayo, nokho-ke, kuwumqondo omuhle ukusebenzisa ithemometha, ukuze uqinisekise ukuthi igcinwe endaweni enethezekile, izinga lokushisa elingaguquki lenhlanzi yakho. Uzodinga ukuthenga isihlungi sethangi lakho, kanye nesivalo, ukukhanya, nekhithi yokuhlola i-pH.
Nakuba ezinye izinhlanzi zithanda izinga lokushisa elifudumele, amanzi afudumele kakhulu angaba yingozi kunoma iyiphi inhlanzi. Amazinga okushisa aphakeme andisa isidingo somoya-mpilo futhi anciphise ukutholakala kwawo. Njengoba amazinga okushisa enyuka, ubuthi bamanzi bungakhula, njengoba izinto ezinobuthi zincibilika kakhulu.
I-Coldwater ibamba umoya-mpilo omningi kunamanzi afudumele, futhi izinhlanzi zasemanzini abandayo njenge-goldfish zinesidingo esikhulu somoya-mpilo. Awudingi nhlobo, kodwa ukukhanya kwe-aquarium kuzokhanyisa i-aquarium futhi kubonise imibala yezinhlanzi. Futhi uma ufuna izitshalo eziphilayo uzodinga eyodwa ke futhi.
85F(29.4C) Amanzi azizwa epholile kunokufudumala.
Omunye umphumela ongemuhle wokugcina izinhlanzi zasemanzini abandayo emazingeni okushisa asezindaweni ezishisayo ubude besikhathi sokuphila obufushane kakhulu obuzovela ngenxa yokuthi izinhlanzi zihlala zigcinwe ezingeni eliphezulu ngokungekona ngokwemvelo. Ngokugcina izinhlanzi zakho zasemanzini abandayo zipholile, zizojabulela impilo ende, enempilo.
I-thermometer yenduku enamathela eceleni kwethangi iyindlela elula yokugcina wazi izinga lokushisa, futhi kufanele uhlole izinga lokushisa njalo uma ubheka ithangi ukuze uqiniseke ukuthi azikho izinguquko ezingavamile. Ama-thermometer acwilisiwe nawo ayatholakala kodwa angabiza kakhulu.
Izinhlanzi Zasezindaweni Ezishisayo Ziyinketho Engcono Kakhulu Kwabaqalayo Yebo, izinhlanzi zasezindaweni ezishisayo zizodinga ukuthi amanzi azo agcinwe endaweni ethile phakathi kuka-20-25°C kuye ngohlobo lwezinhlobo, kodwa izinhlanzi zasezindaweni ezishisayo cishe ziwukubheja okungcono kakhulu kwabaqalayo. Kungani lokhu?Mar 9, 2021.
Gcwalisa ithangi lakho cishe ingxenye eyodwa kwezintathu ngamanzi okushisa kwegumbi aphuma ebhakedeni elihlanzekile. Ukuthela amanzi epuletini noma esosweni elihlezi phezu kwetshe kuzosiza ukugcina igravel isendaweni. Engeza isipholile samanzi, njenge-Tetra® AquaSafe® Solution, ukuze ukhiphe i-chlorinate emanzini. I-Chlorine ikulungele, hhayi inhlanzi yakho!
Linda kuze kube yilapho womabili amazinga e-ammonia ne-nitrite ekhuphukile bese ehla aze afike kuqanda ngaphambi kokwengeza izinhlanzi eziningi. Ngokuvamile kuthatha amasonto angu-3-6 ukuze i-aquarium entsha idlule kumjikelezo wokuqala we-nitrogen, ngakho-ke izinhlanzi kufanele zengezwe ezimbalwa kuphela ngesonto ngalesi sikhathi.
Ingakanani I-Amoxicillin Fish Tank Aquarium Amanzi
Impendulo Esheshayo: Ngingangeza Amanzi Afudumele Ethangini Lezinhlanzi
Umbuzo: Ngingasebenzisa Amanzi Amathangi Ezinhlanzi Ezidala Nge-Aquarium Entsha
Ngingangeza Amanzi Afudumele Ethangini Le-Betta Fish
Ngingafaka Amanzi Kampompi Afudumele Ethangini Lami Lezinhlanzi
Ngingasebenzisa Amanzi Kampompi Afudumele Ngethangi Lami Lezinhlanzi
Impendulo Esheshayo: Ingabe I-Catfish Izinhlanzi Ezifudumele Zamanzi
Impendulo Esheshayo: Ingabe I-Glofish Izinhlanzi Zamanzi Afudumele
Ingabe I-Goldfish Izinhlanzi Zamanzi Ezifudumele
Umbuzo: Ingabe i-Sturgeon Water Warm Fish
Ingakanani I-Aquarium Gravel Ethangini Lezinhlanzi
Impendulo Esheshayo: Ingabe I-Fish Tank Water Conditioner Ingenza I-Tank Water Murky